Wararka Maanta: Isniin, Aug 13, 2012-Danjire Mahiga oo sheegay in Toddobaadka soo socda lasoo dooran doono Afhayeenka Baarlmaanka iyo Madaxweyne
Ergayga ayaa sheegay inay rajo weyn ka qabaan todobaadkan in lagu soo dhameystio xulidda baarlamaanka cusub ee Soomaaliya si ay howsha baarlamaanka u billaabato toddobaadka soo socda.
"Waxaynu ku jirnaa dhameystirka xilliga KMG ah, toddobaadkan waxaa la hirgelin doonaa baarlamaan ka kooban 275 xubnood, kuwaasoo toddobaadka soo socda soo dooran dooran doona guddoomiyaha, ku xigeennadiisa iyo madaxweyne, waxaana ku rajo weynnahay in wax walba lagu dhameystiri doono waqtigii harsan," ayuu yiri Mahiga oo wareysi siinayay BBC-da.
Danjire Mahiga oo la weydiiyay inay baqdin ka qabaan in waqtiga uu dib u dhaco, maadaama xidhibaanno ka mid ah kuwa lasoo xulay dib loogu celiyay odayaasha, ayaa wuxuu sheegay in la haysto waqti ku filan in howsha dhiman lagu qabto, isagoo sheegay in odayaashu ay hayaan magacyada dad ay ku bedeli karaan kuwa la diiday.
Sidoo kale, su'aal kale oo ahayd inay jirto qaylo-dhaan ka timid dadweyaha oo ku saabsanayd laaluush bixin iyo hanjabaad, ayaa kaga jawaabay: "waxaan rajo weyn ku qabnaa in dowladda soo socota ay sameyn doonto aasaasyo sharci ah oo tallaabo looga qaadi doono arrimahan loogu talo-galay in la isku hortaago in la dhameystiro xilliga KMG ah."
Dajire Mahiga wuxuu sheegay inay iyagu horay u caddeeyeen in musuqmaasuqa jira ay kaga jawaabayaan cunno-qabteyn, balse ma uusan sheegin go'aanka laga filayo inay dowladda KMG ah ka qaato arrintan.
"Waxaan ku kalsoonnahay inay jiraan dad aad u badan oo ceeb ka saliim ah iyadoo baaritaannada iyo tijaabooyinka la marsiinayo murashaxiinta baarlamanka ay tahay sidii lagu badbaadin lahaa sharafta iyo hannaanka daacadnimada, waxaana leennahay guddi farsamo, mid xulid iyo kormeerayaal caalam ah kuwaasoo oo runtii tilmaamay magacyo xoogaa ah," ayuu danjire Mahiga kaga jawaabay su'aal ahayd kalsoonida lagu qabi karo xildhibaanno laaluush ku yimid.
Wakiilku wuxuu sheegay in xildhibaannada maray imtixaanaadka iyo xaqiijinta ay noqon doonaan kuwo lagu kalsoon yahay, isagoo xusay inay awood u yeelanayaan inay dhex istaagaan gudaha baarlamaanka soo socda iyo inay gaarno go'aamo horseedi doona dowlad wanaag.
Ugu dameyn, mar uu ka hadlay ammaanka ayuu sheegay in xaaladda ammaan ee Muqdisho ay tahay hadda tahay mid wanaagsan, isagoo nasiib-darro ku tilmaamay dilal maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay Muqdisho, wuxuuna xusay in ammaanka ay gacanta ku hayaan ciidamada AMISOM iyo iyo kuwa DKMG ah.
Hadalka danjire Mahiga ayaa kusoo beegmaya iyadoo dadaal xooggan loogu jiro sidii xildhibaannada baarlamaanka loogu dhawaaqi lahaa, waxayna guddiga ku howlan xulista xildhibaannada ay sheegeen inay ku jiraan kala saarista magacyada xubnaha loosoo gudbiyay.